Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Riix halkan haddii kani yahay war-saxaafadeedkaaga! » Jilayaasha Jilaa ee Filimka Dalxiiska Cusub ee loogu talagalay caasimadda UAE
John Cena waxay iskaashi la samaysay Waaxda Dhaqanka iyo Dalxiiska Abu Dhabi (DCT Abu Dhabi) ololaheeda cusub ee dalxiiska, ku dhiirigelinta socotada si ay u ballansadaan safarka caasimadda - "stat."
Ka dib fiidiyowga teaser-ka ee la bilaabay usbuucii hore, filimka buuxa ee maanta la sii daayay wuxuu arkay Cena oo ka tagaya qorshayaashiisa safarka ka dib markii uu wax ka akhriyay Abu Dhabi duulimaadkiisa - isagoo muujinaya sababta dhabta ah ee wakhtiga hadda la booqanayo. Si dhab ah u quusta wax kasta oo ay u socoto, Cena baa baarashuud ka soo saartay diyaarad oo ku degtay saqafka caanka ah ee Louvre Abu Dhabi. Fiidiyowgu wuxuu muujinayaa aragtida shimbiraha-indhaha safarka Cena iyada oo loo marayo muuqaalka quruxda badan ee Abu Dhabi, soojiidashada heerka caalamiga ah iyo goobta madadaalada ee halyeeyada ah.
Hoyga qorraxda sannadka oo dhan iyo meel ku habboon qorraxda jiilaalka, Abu Dhabi waxay adduun ku siisaa hal meel-oo ku habboon socotada raadinaya inay soo gudbiyaan rabitaankooda oo abuuraan xusuus cusub. Laga soo bilaabo dune ku dhufashada saxaraha si ay ugu furfurto xeebaheeda saafiga ah, qaadashada muuqaalkeeda fanka iyo dhaqanka ee firfircoon, ama sahaminta noocyo badan oo madadaalo qoyska iyo jardiinooyinka mawduuca - waxaa jira adduun suurtagal ah in la ogaado inta lagu jiro safarka Abu Dhabi .
Filimka ayaa la sii daayay ka dib markii lagu dhawaaqay in Abu Dhabi ay soo dhaweyneyso dhammaan safarrada caalamiga ah ee la tallaalay iyo kuwa ka safraya wadamada Green List ee ku laabanaya Emirate-ka, iyada oo aan loo baahnayn in la karantiilo.